Gareen hayyoota mirga namaa addunyaa Itoophiyaan gidiraa Oromoo irraan geettu akka dhaabdu gaafate - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Gareen hayyoota mirga namaa addunyaa Itoophiyaan gidiraa Oromoo irraan geettu akka dhaabdu...
Gareen hayyoota mirga namaa addunyaa Itoophiyaan gidiraa Oromoo irraan geettu akka dhaabdu gaafate
Qabsoon Oromoon baatii lamaa oliif geggeesse kallattii hedduun injifannoo diploomaasii argamsiise.
Gareen hayyoota mirga namaa Gamtaa Mootummoota Addunyaa (GMA), mootummaan Itoophiyaa gocha ajjeechaa, ukkaamsaa fi doorsisaa humnonnni woraanaa irratti babba’an dafee akka dhaabu gaafate. Hiriira torbaan sagalii oliif geggeeffamaa ture irratti, lubbuun 140 olii galaafatamuu, namoonni heddu mana hidhaa fi bakka hin beekamnetti gatamuu gareen hayyoota mirga namaa GMA kuni ibseera.
‘Laakkofsi namoota ajjeefamanii akkas heddumaachuun mootummaan Itoophiyaa lammii isaa akka gufuutti kan ilaalu ta’uu agarsiisa,’ jedha ibsi kuni. Achi buuteen mormitoota hedduu beekamuu dhabuuunis kan isa yaachise ta’uu addeessa, gareen kuni ibsa isaa keessatti.
Gareen hayyootaa kuni mootummaan maaster pilaanii Finfinnee dhaabe jechuu gammachuun simate. Ta’us garuu, mootummaan ammas ajjeechaa, hidhaa fi humna daangaa ce’etti dhimma bayuu itti fufuun kan hedduu isa yaachise ta’uu gareen kuni ibsa isaa keessatti tuqeera. ‘Hanga woraanni ummata karaa nagaan mirga isaa gaafatu doorsisuu dhiisutti, maaster pilaanii dhiise jechuun mootummaa murtii onnee irraa dabarfame jedhanii fudhachuun nama rakkisa,’ jedha gareen hayyoota mirga namaa GMA. Itti fufuudhaanis, ‘Gaheen humna tika nagaa naga ummata hiriira bayuu eeguudha malee ukkaamsuu fi doorsisuu miti.’
Mootummaan Itoophiyaa mormitoota mirga isaaniitti dhimma waan bayan qofaaf hidhaman hatattamaan akka gadi lakkisuu fi kanniin hanga ammatti achi buuteen isaanii hin beekamnes eessa akka geesse akka agarsiisu gaafate. Tankaarfii woraanni ummata nagaa irratti fudhates qaamni walaba ta’e bifa iftoomina qabuun akka qoratus gaafateera.
Itoophiyaan waanuma gale hundaaf seera farra shororkaatti dhimma bayuu isii qeeqa, gareen hayyootaa kuni. Ibsi garee kanaa, ‘Ummata hiriira nagaa bayu yakkuuf seera farra shorokaatti dhimma bayuun hedduu nama gaddisiisa,’ jedha. ‘Ummata nagaatti maqaa shororkeesssaa jedhu maxxansuun seera mirga namaa addunyaa cabsuu qofa osoo hin taane abdii hawaasni addunyaa lola farra shororkaa dhugaa irratti Itoophiyaa irrraa qabu haqa.’ Mootummaan Itoophiyaa ummata biyyattiif hiree yaada isaanii ittiin ibsatan kennuuf itti gaafatamummaa akka qabu yaadachiisa.
Qabsoon Oromoon aarsaa guddaa kaffalaa geggeessaa jiru injifannoo gurguddaa galmeessisiisaa dhufaa jiraachuun ifa. Sochiin eegalame cimee itti fufe taanaan Oromoon injifannoo boonsaa gonfachuu fi bilisummaa harkatti galfachuu humni isa dhoorgu tokko kan hin jirre ta’uu isaa hayyoonni siyaasaa irra deddeebi’aa dubbatu.
Qabsoon Oromoon baatii lamaa oliif geggeesse hadhaayaadha. Sochii ummata dhaamsuuf mootummaan woraana bobbaasaa fi rasaasa ummatatti roobsaa ture. San hunda dandamateeti qabsoon Oromoo kan har’a geette. Injifannoon kuni hundi kan argame wareegama qaaliidhaan. Gatiin kana fakkaatu erga kaffalamee booda usuu fi qabsoo irraa uffageessuun waan arganne harcaasuu fi dukkanatti ufdeebisuudha. Sochiin gara funduraa, injifannoo argame cimsachuu fi kan caaluuf ammoo mudhii hidhachuun hojjachuun gaafatti.
Gaarrii kana booda bayamu fi lagni ce’amu, tarii akka nuti yaannu, hedduu cimaa ta’uun nimala. Riqichi reeqqisuu fi masaraa keessa qilleensi bubbisuu mallattoon agarsiisan heddummaataa dhufaniiru. Oromoon mirgaa fi haqa isaa kan gonfatu, qabeenya isaa kan tikfatu, kabajaa fi deeggarsa addunyaas kan argatu akkas daanditti bayee onnee guutuun yoo dubbatu. Qabsoon itti fufa!
labsii garee hayyooya mirga namaa
Previous articlePaarlaamaan Gamtaa Awurooppaa har’a dhimma Oromoo irratti marii taa’a
Next articleTarsiimoo cimaa fincila ittiin finiinsinuu fi umrii isaa ittiin dheeressinu nu barbaachisa